मन पर्न छोडेकै हो त सैफलाई करीनाको ‘हट लुक्स’ ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री करीना कपूर खान आफ्ना केटी साथीहरुसँग फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ को प्रमोशनमा व्यस्थ रहेकी छन् ।
केही दिन अगाडि करीना फिल्मको ‘ग्र्याण्ड म्युजिक लन्च’ मा कालो पहिरनमा निकै स्टाइलिश भएर पुगेकी थिइन् ।
उक्त पहिरनलाई लिएर उनका पती सैफले उनको उक्त पहिरन मन नपराएको कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
करीनाले भनिन्, ‘जब म कार्यक्रम सकेर घर पुगेँ । मलाई देखेर सैफले सोधे, ‘तिमीले यो के लगाएको ? जाउँ कपडा बदलेर आउँ ।’ करिनाले भनिन्, ‘अनि मैले कार्यक्रमको फोटोहरु देखाए । त्यसपछि उनले भने, ‘यो राम्रो रहेछ ।’
उनको फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’ जून १ मा रीलिज हुँदैछ ।